सन्दीप ‘आइसीसी विश्व ११’ टिममा, अरु को-को ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सन्दीप ‘आइसीसी विश्व ११’ टिममा, अरु को-को ?
काठमाडौं । सन्दीप लामिछाने आइसीसी विश्व ११ टिममा परेका छन् । वेष्ट इन्डिजविरुद्ध हुन लागेको एक टी-ट्वान्टी खेलका लागि आइसीसीले छानेको टिममा सन्दीप पनि परेका हुन् । उक्त खेल वेष्ट इन्डिजको क्यारेबियनमा आँधीबाट भत्किएको क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने हेतुले आइसीसीले वेष्ट इन्डिजविरुद्ध खेलाउन लागेको हो ।
उक्त टीममा सन्दीप बाहेक विश्वका चर्चित खेलाडीहरु समावेश छन् । जसमा भारतका दिनेश कार्तिक र हार्दिक पाण्डेय रहेका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानका साहिद अफ्रिदी र सोयब मल्लिक, श्रीलंकाका थिसरा परेरा, बंगलादेशका तमिम इक्बाल, न्यूजिल्यान्डका मिचेल म्याकलेनघान र लुक राँची रहेका छन् । यस टीमको कप्तानी इंगल्याण्डका इयोन मोर्गनले गर्नेछन् ।
सन्दीप आइपीएल खेल्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर समेत हुन् । उनले विश्व क्रिकेटका स्टार विराट कोहली र एबी डी भिलियर्सलाई बलिङ गरेर प्रशंसा समेत कमाएका थिए । केही दिनअघि भएको दिल्ली र बैंगलोरबीचको खेलमा सन्दीपले किफायती बलिङ गर्दै १ विकेट समेत लिएका थिए ।
एजेन्सी । आइतबार राति ला लिगामा रियल मड्रिडकालागि दुई विशेष महत्वपूर्ण घटना घटे। पहिलोले खुशी बनाउँछ भने […]
एशियन गेम्समा ३६ वर्षपछि नेपालको गोल
काठमाडाैँ । एशियन गेम्समा ३६ वर्षपछि नेपालले गोल गरेको छ। जारी १८ औँ एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा नेपालले […]
एजेन्सी । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले वेस्टइन्डिजमा जारी क्यारेबियन प्रिमियर लिग […]
जेरार्ड पिकेद्वारा अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
काठमाडौँ । स्पेनका स्टार खेलाडी जेरार्ड पिकेले अन्तराष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका छन् । सन् २०१० को […]